Gmail တွင် နေရာလွတ်လုပ်ရန် နည်းလမ်းများ - VidaBytes | LifeBytes
Encarni Arcoya | 04/05/2022 12:33 | Gmail ကို
Gmail သည် လူသုံးအများဆုံး အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ Google ပရိုဂရမ်တွင် အီးမေးလ်လိပ်စာ အနည်းဆုံးရှိသူနှင့် အခြားမည်သူမှာ ရှိပါသနည်း (တစ်ခုမှမရှိသူများ အများအပြားရှိပါသည်)။ ပြဿနာမှာ ၎င်းသည် နေရာလွတ် 15 ဂစ်ဂါဗိုက်သာ ပေးဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။. Gmail မှာ နေရာလွတ်တွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဒီမေးလ်တွေ ကုန်သွားမလဲ။
အဲဒါကို ဒီတခေါက်တော့ ကျနော်တို့ ကိုင်တွယ်မယ်။ သင့်အား ၎င်းမှထွက်မပြေးစေရန်အတွက် အသုံးဝင်စေမည့် လှည့်ကွက်အချို့ကို ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့် ဤမနှစ်မြို့ဖွယ်အံ့သြဖွယ်များကို ဖြတ်သန်းနေစရာမလိုပေ။
1 Gmail မှာ နေရာလွတ်မရှိရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
2 သင့်မှာ နေရာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
3.1 အရိုးရှင်းဆုံး- မက်ဆေ့ချ်ဘင်ကို နှုတ်ဆက်ပါ။
3.2 spam များကိုဖယ်ရှားပါ။
3.3 ပြင်းထန်သောအီးမေးလ်များကို ဖယ်ရှားပါ (၎င်းတို့သည် သင့်အတွက် အဆင်မပြေပါက၊ ဟုတ်ပါတယ်)
3.4 Google Photos နှင့် Google Drive အကြောင်း မမေ့ပါနှင့်
4 ငါဘာမှ မရှင်းနိုင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
Gmail မှာ နေရာလွတ်မရှိရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
ပထမအချက်က ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ သိဖို့ပါပဲ။ ငါတို့အရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲ Gmail က မင်းကို 15 ဂစ်ဂါဗိုက် အခမဲ့ပေးတာကြောင့် မင်းအလိုရှိတဲ့အတိုင်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနေရာကနေ ပြေးထွက်သွားတဲ့အခါ၊ Gmail က သင့်ကို ဆက်သွယ်ပါတယ်။.
သင်သည် မည်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုမျှ လက်ခံရရှိမည်မဟုတ်ပါ။. ကြိုးစားသူများသည် သင့်အကောင့်တွင် ၎င်းတို့၏ မက်ဆေ့ချ်ကို သိမ်းဆည်းရန် နေရာမရှိဟု အီးမေးလ်တစ်စောင် လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။
တစ်နည်းအားဖြင့် အဲဒီအီးမေးလ်မပါဘဲ သင်ရှိနေလိမ့်မယ်။.
အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာများအတွက် သင်အသုံးပြုသည့်အရာဖြစ်ပါက ၎င်းသည် ပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင့်မှာ နေရာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကြောက်တယ်။ နေရာဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲ သိချင်ပါတယ်။ မင်းကို ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်အောင် ဒါမှမဟုတ် ပိုစိတ်အေးလက်အေးနေဖို့၊ အဲဒါကို လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းရှိတယ်။
ပထမဦးဆုံး Gmail ထဲကိုဝင်ပြီးတာနဲ့ အဲဒါကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဟုတ်ကဲ့၊ သင့်ကွန်ပြူတာမှာ; မိုဘိုင်းလ်တွင် သင်မြင်မည်မဟုတ်ပါ။ စခရင်ကို ကြည့်လိုက်ရင် ဘယ်ဘက်၊ အောက်ခြေမှာ ရှိတဲ့ မက်ဆေ့ချ်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ သင် သိမ်းပိုက် ထား သော နေရာ နှင့် သင် လွတ် လပ် သော နေရာ များ ကို ပြောပြ သည်. Manage ကိုနှိပ်ရင် Google Drive၊ Gmail၊ Photos တွေဆိုရင် သင်အများဆုံးအသုံးပြုတဲ့အရာကို သိနိုင်စေမှာပါ။
အခြားရွေးချယ်စရာမှာ ကွန်ပျူတာ၊ တက်ဘလက် သို့မဟုတ် သင့်မိုဘိုင်းမှ ဤအရာသို့ ဝင်ရောက်ရန်ဖြစ်သည်။ link ကို Que တူညီသော admin page သို့ခေါ်ဆောင်သွားပါ။ အတူတူကြည့်ဖို့။
အခု မင်းမှာ ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ သိလား။ သို့သော် ၎င်းသည် သင့်အား Gmail တွင် နေရာလွတ်များ လွတ်အောင် မကူညီနိုင်သောကြောင့် သင်စိတ်မပူဘဲ သင့် Gmail အကောင့်ကို အချိန်ကြာကြာ ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်စေရန် နည်းလမ်းကောင်းအချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပေးပါမည်။
အရိုးရှင်းဆုံး- မက်ဆေ့ချ်ဘင်ကို နှုတ်ဆက်ပါ။
လက်ခံရရှိထားတဲ့ မက်ဆေ့ချ်ကို ဖျက်လိုက်တဲ့အခါ လုံးဝမပျောက်ဘူးဆိုတာ သင်သိပါသလား။ တကယ်တော့, သင့်အမှိုက်ဖိုဒါသို့သွားပါ။ ထိုနေရာ၌ ရက် 30 ကြာနေလိမ့်မည်။.
ကြီးမားသောအီးမေးလ်များကို လက်ခံရရှိပါက ၎င်းတို့သည် သင့်အမှိုက်ပုံးတွင် စုပုံနေလိမ့်မည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင့် 15Gb ၏ ရာခိုင်နှုန်းအတော်အတန်ကို သိမ်းပိုက်သည့်အချိန်တစ်ခု ရောက်လာလိမ့်မည်။. အဖြေ? အမှိုက်သွန်ပစ်နေပြီ.
ဤနည်းအားဖြင့် သင်သည် နေရာလွတ်တစ်ခုကို လွတ်နေပြီဖြစ်သည်။
သင်သည် spam ဖိုင်တွဲကို အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးပါသလား။ အရေးကြီးသော မက်ဆေ့ချ်များကို ထိုနေရာတွင် အဆုံးသတ်နိုင်ရုံသာမက (တစ်ခါတစ်ရံတွင် Gmail သည် ၎င်းတို့ကို Gmail အများအပြားအသုံးပြုသောကြောင့် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့သည် spam အဆက်အသွယ်ဖြစ်သည်ဟု ထင်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ဖိုင်တွဲထဲတွင် ထည့်ထားနိုင်သည်)၊ များလွန်းလျှင် အလေးချိန် များသည်။။ ဒါကြောင့် တခါတရံ အမှိုက်ပုံးထဲမှာ ဒီလိုပဲ လုပ်ပါ။: နှုတ်ဆက်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည် သင်၏ Gmail အီးမေးလ်ကို အချိန်အကြာကြီး အသုံးချနေပါက၊ မင်းမှာ မက်ဆေ့ချ်တွေ ထောင်နဲ့ချီပြီး ရှိနေတာ သေချာပါတယ်။ သို့မဟုတ် သန်းပေါင်းများစွာ. ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်၊ ခုနစ်နှစ် ဒါမှမဟုတ် ဆယ်နှစ်လောက်က ရေးခဲ့တဲ့ အီးမေးလ်ကို သင်တကယ် စိတ်ဝင်စားပါသလား။ မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်။ မက်ဆေ့ချ်များကို စွန့်ပစ်ခြင်းဖြင့် အနည်းငယ် ရှင်းလင်းပြီး Gmail တွင် နေရာလွတ်များ ပြုလုပ်ပါ။ ဘာကို ဂရုမစိုက်တော့ဘူး
ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါက လေးလံတယ်၊ မင်း အဲဒါတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြတ်သွားရမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် မင်းမေးလ်ကို ဆုံးရှုံးတာထက် ပိုကောင်းပါတယ်။
ပြင်းထန်သောအီးမေးလ်များကို ဖယ်ရှားပါ (၎င်းတို့သည် သင့်အတွက် အဆင်မပြေပါက၊ ဟုတ်ပါတယ်)
တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိသော အီးမေးလ်များသည် အလွန်လေးလံပါသည်။ အဲဒါကို သတိရပါ။ 25Mb အထိ အီးမေးလ်များ ပေးပို့နိုင်သည်။ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့အားလုံး အာကာသကို သိမ်းပိုက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် Gmail သည် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏထက် ပိုလေးသော အီးမေးလ်များကိုသာ ဖယ်ရှားနိုင်စေရန် ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်နိုင်သည်။၎င်းတို့ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး သင့်အားမဆောင်ရွက်ပေးသောသူများကို ဖျက်ပါ။
အဲဒါကို ဘယ်လို လုပ်တာလဲ။ ငါတို့ပြောမယ်။
သင့်ကွန်ပြူတာတွင် Gmail ကို ဦးစွာဖွင့်ရပါမည်။ ထို့နောက်တွင်၊ သင်သည် အီးမေးလ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခု (ဝဘ်တွင်လည်းရှိသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် အီးမေးလ်တစ်ခုလိုအပ်သည်) နှင့်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ အခြားတစ်ဖက်တွင် မြှားတစ်စင်းကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။ ပေးလိုက်ရင်၊ အဆင့်မြင့်ရှာဖွေမှုသို့ သင်ရောက်ရှိပါမည်။. အဲဒီမှာ "အရွယ်အစား" ကိုရှာပါ။ ၎င်းကို "ကြီးမြတ်သည်" နှင့်လုပ်ပါ။ ထို့နောက် 10MB သို့မဟုတ်5သို့မဟုတ် သင်လိုချင်သမျှကို ထည့်ပါ။.
၎င်းကိုရှာဖွေပြီး သင်ထည့်ထားသည်ထက် ပိုလေးသောအီးမေးလ်များကို ဖယ်ရှားပါမည်။ ၎င်းတို့သည် အရေးကြီးခြင်းရှိ၊ မရှိကိုသာ သင်မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ မဟုတ်ပါက ၎င်းတို့ကို သင်ဖျက်နိုင်သည်။.
နောက်ထပ်တိုက်ရိုက်နည်းလမ်းမှာ အောက်ပါတို့ကို ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင် ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ "ရှိသည်-တွယ်တာပိုကြီး-10M" (သင် 10 ကို သင် ကြိုက် ရာ နံပါတ် သို့ ပြောင်း နိုင် သည် ။
Google Photos နှင့် Google Drive အကြောင်း မမေ့ပါနှင့်
သင့်တွင်အခမဲ့ 15Gb သည် Gmail အတွက်သာမက၊ ၎င်းတို့ကို Google Photos နှင့် Drive နှင့်လည်း မျှဝေပါသည်။. ဆိုလိုတာက သင့်မှာ Drive ထဲမှာ ဓာတ်ပုံ ဒါမှမဟုတ် စာရွက်စာတမ်းတွေ အများကြီးရှိနေရင်ဤအရာများသည် သင့်ခွဲတမ်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်နေပေမည်။.
ဒါကြောင့် မေးလ်တွေ ပြီးသွားတဲ့အခါ မေးလ်တွေ အများကြီးရနေသေးရင်၊သို့မဟုတ် ပိုကောင်းသည်မှာ ဤကိရိယာနှစ်ခုတွင် သင့်တွင်ရှိသော ဓာတ်ပုံများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး သင့်အတွက် အသုံးမဝင်သောအရာများကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။. ၎င်းသည် ဟောင်းနေပါက သို့မဟုတ် သင်အသုံးပြုပြီးဖြစ်ပါက ၎င်းကို ထိုနေရာတွင်ထားရှိခြင်းသည် မိုက်မဲပြီး ပိုမိုဆိုးရွားသောပြဿနာများကိုရှောင်ရှားရန် Gmail နေရာလွတ်ကို သင်ရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ငါဘာမှ မရှင်းနိုင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
မင်းမှာရှိသမျှအရာအားလုံးက အရေးကြီးသလို၊ အခြေအနေမှာ မင်းကိုယ်မင်းတွေ့နိုင်တယ်။ သင်အလိုရှိသောကြောင့် မည်သည့်အရာကိုမျှ ဖျက်၍မရပါ။. အဲဒီအခါမှာ မေးလ် ပျောက်သွားသလား။ နောက်တစ်ခု ဖန်တီးရမလား။ ကောင်းပြီ၊ မင်းလုပ်စရာမလိုဘူး။
gmail ရယ် နေရာဝယ်နိုင်ရမယ်။. တစ်နည်းပြောရရင်တော့။ သင့်တွင် 15GB အခမဲ့ အစီအစဉ်ရှိသည်။ သို့သော် မည်သည့်အရာကိုမျှ မဖယ်ရှားနိုင်လျှင် သို့မဟုတ် Gmail တွင် နေရာလွတ်မရှိပါက၊ အဖွဲ့ဝင်မှုအစီအစဉ်အတွက် စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။
တကယ်တော့, အခြေခံက သင့်အား 100GB ပေးမည်ဖြစ်ပြီး တစ်လလျှင် 1,99 ယူရို သို့မဟုတ် တစ်နှစ်လျှင် 19,99 ယူရို ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။. သင်ပိုမိုလိုအပ်ပါက၊ ၎င်းတို့တွင် တစ်လလျှင် 200 သို့မဟုတ် တစ်နှစ်လျှင် 2,99 ပေးဆောင်ရန် 29,99GB အခြားအစီအစဉ်တစ်ခုရှိသည်။ နေရာအများကြီးလိုအပ်သူများအတွက်၊ တစ်လလျှင်2သို့မဟုတ် တစ်နှစ်လျှင် 9,99 ဖြင့် 99,99TB ရှိသည်။
Gmail တွင် နေရာလွတ်ဖြစ်စေရန် နောက်ထပ်နည်းလမ်းများကို သင်သိပါသလား။ ငါတို့ကိုပြောပြပါ!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » Gmail ကို » Gmail တွင် နေရာလွတ်လုပ်ရန် နည်းလမ်းများ